Sanduuqa aaladda ayaa ku lumay Ereyga, maxaan sameeyaa? | Madasha Mobile -ka
Cristian Garcia | 04/10/2021 09:31 | Microsoft Word, Qalabka otomaatiga
Haddii aad tahay isticmaale Microsoft Word, waxaad ogaan doontaa in qaar badan oo ka mid ah aaladaha, oo aan weligood si fiican loo sheegin, laga dhex helo aaladda aaladda lafteeda. Iyo in la waayo waa dhibaato aad u weyn. Barkani wuxuu ahaa liis ay ku jiraan dhammaan xulashooyinka muhiimka ah ee Ereyga sidaa darteedna haddii aaladda qalabku ku baaba'do Ereyga sida aan nidhaahno waa dhibaato weyn marka ay timaado qaabeynta dukumintiga wax kasta oo loogu talagalay.
Mararka qaarkood tani waxay u dhici kartaa qalad awgii ama wax kasta oo dibi dhal ah uun baa meesha ka baxaya. Tani sidoo kale wuxuu ku fidaa barnaamijyada kale ee Microsoft Office sida Microsoft Excel iyo Microsoft Power Point. Qalabkan ayaa sidoo kale laga heli karaa barnaamijyadaas wuxuuna noqdaa mid lama huraan ah meelo badan. Waxaa laga yaabaa in la qariyo ama la yareeyo markaa haddii aadan garanayn sida loo soo celiyo ma awoodi doontid inaad gasho ilaa aad dib ugu celiso goobteeda. Laakiin ha welwelin, waxaas oo dhan waa la hagaajin karaa waxaana lagu xallin karaa si aad u dhakhso badan oo sahlan (sida had iyo jeerba).
Dhamaadka maqaalka waxaan kuu sheegi doonnaa sababta aan ugu malaynayno in tani badanaa dhacdo, maxaa yeelay dhab ahaan, iyo saadaalinteeda, waxay noqon kartaa sababo badan. Runtu waxay tahay in mararka qaarkood ay sabab u noqon karto qalad, beddelidda shaashadda iyo xallinta ama sababo badan oo kale oo sababi doona in aaladda qalabku baaba'do ama had iyo jeer u muuqato in la yaraynayo iyadoon la xannibin. Oo waxaan fahansanahay in haddii aad akhrinayso maqaalkan ay tahay sababta oo ah waxaad dooneysaa inaad had iyo jeer haysato muuqaal iyo gacanta.
1 Qalab -qaadaha wuxuu ku baaba'aa Ereyga: Sidee loo soo celiyaa?
1.1 Sida loo soo cesho aaladda aaladda qaababkii ugu dambeeyay ee Microsoft Word?
1.2 Sida loo soo cesho aaladda aaladda 2010 ama noocyadii hore ee Microsoft Word?
2 Waa maxay sababta aaladda qalabku sida caadiga ah ugu baaba'do Microsoft Word?
Qalab -qaadaha wuxuu ku baaba'aa Ereyga: Sidee loo soo celiyaa?
Iyada oo ku xidhan nooca Microsoft Office ee aad haysato, tusahan ayaa xoogaa kala duwanaan doona. Tusaale ahaan, haddii aad haysato midkii 2010kii ama ka hor, waa inaad akhridaa qayb gaar ah oo maqaalka ah, ugu dambaysa dhammaadka. Si kastaba ha ahaatee waa inaan sidoo kale sheegnaa in tani loogu talagalay noocyada nidaamka hawlgalka Windows. Waxaas oo dhan iyo mar haddii aad ogaato waxay tahay, waxaan kuu sharxi doonnaa sida loo sameeyo aaladda toolbar ee ku baaba'day Ereyga inuu dib ugu soo noqdo noloshaada.
Sida loo soo cesho aaladda aaladda qaababkii ugu dambeeyay ee Microsoft Word?
Sidii aan nidhi, haddii aad ka timid noocyadii hore ee Microsoft Word, waxaad si fiican u aadi lahayd qaybta ugu dambaysa ee maqaalka maadaama aan ka bilaabi doonno kuwii ugu dambeeyay. Waxa ay tahay inaad ku samayso Ereyga ayaa asal ahaan ka eeg qaybta sare ee midigta ee barnaamijka barnaamijka. Waa inaad toos u tagtaa badhamada si aad u xirto, u yareyso iyo kuwa kale, Halkaas waxaad ka heli doontaa badhanka la riixi karo ee ikhtiyaarada bandhigga oo markaad gujiso, sanduuq ayaa la soo bandhigi doonaa.
Sanduuqaas waxaad ku dooran kartaa sida aad rabto in codsiga Word loo muujiyo. Ikhtiyaarka caadiga ah ayaa noqon doona midka kuu muuqan doona si aad u gujiso sida "Muuji tabyada iyo amarrada" Markaad halkaas gujiso, wax walbana way soo muuqan doonaan annaguna waan xallinnay dhibaatada. Sidaa darteed Waxaan hore u xallin doonnaa xaqiiqda ah in aaladda qalabku ku baaba'do Ereyga.
Sida loo soo cesho aaladda aaladda 2010 ama noocyadii hore ee Microsoft Word?
Haddii aad ka mid tahay kuwa aan wax badan cusboonaysiin Xafiiska Microsoft, markaa waad joogi doontaa halkan. Waxaa laga yaabaa inaad haysato 2010 ama nooc hore Microsoft Word. Laakiin ha ka welwelin wax badan maxaa yeelay wax walba waa go'an yihiin, xitaa qaababkii hore. Haddii aad tahay mid ka mid ah kuwa dambe, waxaan ku bilaabaynaa hagaha deg -degga ah si aan u soo ceshano aaladda qalab ee maqan:
Hadda waa inaad aragtaa astaan ​​si aad u muujiso baarka ama aad u hagaajiso haddii ay yaraato. Si aad tan u ogaato hubaal waa inaad doorataa tab sida Guriga, oo waxaa laga yaabaa in aaladda qalabku si ku -meel -gaadh ah u soo muuqato). Badhankan ayaa laga yaabaa inuu yahay fallaadh hoos u ah noocyadii hore ee Microsoft Word, Waxa kale oo ay noqon kartaa suul -gacmeed sida midka aan ku ridnay sawirka kore. Si kastaba ha ahaatee, waa inay ku taal geeska midig ee sare, astaan ​​kasta oo ay leedahay. Markaad hesho biinkan oo guji, waxaad hagaajin doontaa dhammaan aaladda qalab ee soo muuqatay wakhtigaas. Wax walba si sax ah ayey u hagaajin doonaan ilaa aad mar labaad ku furato suulka.
Waa maxay sababta aaladda qalabku sida caadiga ah ugu baaba'do Microsoft Word?
Kahor intaanan tagin waxaan rabnaa inaan maqaalka ku dhammeyno sababta baarkaani u baaba'ayo, si aad wax walba u tixgeliso oo aysan mar dambe u dhicin. Qaabkan uma baahnid inaad u adeegsato Google ama Forum Mobile sida aad hadda sameyneyso. Maskaxda ku hay qodobbada aan hoos ku dari doonno maxaa yeelay waxay qayb ka yihiin hagaha aad ku baratay sida loo soo ceshado aaladda aaladda Word.
Laga soo bilaabo waayo -aragnimadayada aaladda qalabku waxay ku baaba'daa Ereyga sababta oo ah kuwa soo socda:
Waxaad ka tagtay sanduuqa aaladda loo dhigay si is-qarin oo aan muuqan.
Habka explorer.exe waa la xanibay iyo qalabkii qalabku gabi ahaanba wuu baxay.
La xalka shaashadda ama shaashadda weyn ayaa la beddelay taasina waa ta keentay in aaladda qalabku ka baaba'do shaashadda.
Waxaad gujisay riix -riix caan ah oo aad furtay baarka oo dhan sidaas darteed wuu baaba'ayaa wuxuuna u muuqdaa sida uu doono.
Haddii midkoodna uusan adiga kuu shaqeynin oo barku uusan marna soo muuqan, waxaad mar walba aadi kartaa Xafiiska Microsoft iyo taageerada Word haddii noocaaga la bixiyo. Ama haddii aysan ahayn, raadi beddellada Ereyga oo adiga kuu roon adiga oo ah hawl -wade erey. Mid ka mid ah oo si weyn loogu isticmaalo internetka waa Xafiiska Furan, farsameeyaha ereyga oo lacag la'aan ah Suite oo sidoo kale ku jira noocyo kale oo loo yaqaan Excel oo la yiraahdo Lambarada ama Microsoft Power Point, sida Draw. Ma aha ikhtiyaar xun oo waad ku xisaabtami kartaa.
Waxaan rajaynaynaa in maqaalkani waxtar u lahaa oo aad hore u ogaatay sababta aaladda qalabku ugu baaba'day Ereyga laakiin wax walba ka sarreeya, in hadda aad taqaanid sida dib loogu soo celiyo oo looga tago si go'an. Haddii aad qabtid wax su'aalo ah ama soo jeedin ah waxaad kaga tagi kartaa sanduuqa faallada. Waxaan kugu arki doonaa maqaalka Madasha Mobaylka xiga.
Wadada buuxda ee maqaalka: Golaha Moobaylka » Qalabka otomaatiga » Sanduuqa aaladda ayaa ku lumay Ereyga, maxaan sameeyaa?
Sida looga saaro asalka sawirada lacag la'aan iyo tayada HD